Qaxootiga Soomaalida ee DHADHAAB oo beeniyey eedeymo uga Yimid Hoggaamiysha Soomaalida Kenya!! | SAHAN ONLINE
Qaxootiga Soomaalida ee DHADHAAB oo beeniyey eedeymo uga Yimid Hoggaamiysha Soomaalida Kenya!!
Qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan xerada dhadhaab ayaa iska fogeeyey eedeymo xiriir ah oo uga yimid qaar kamid ah hoggaamiyaasha Soomaalida waqooyi Bari-kenya.
Hoggaamiyaashan Soomaalida waqooyi Bari-kenya ayaa ku eedeeyey qaxootiga iney mas’uul ka yihiin weerarada iyo amaan darada ka jirta gobolka ,waxayna ku baaqday dowlada kenya in dalkooda dib loogu celiyo qaxootiga.
Maxamed Ibraahim Cabaas oo ah mudane laga soo doorto deegaanka Ijaara ayaa Madaxweynaha kenya Uhuru Kenyatta ka codsaday in qaxootiga ku sugan xeryaha dib dalka Soomaaliya loogu celiyo.
….”Waxaan rabnaa dowlada kenya si degdeg eh oo beri ka bilaabata in la xiro Xeryaha ..ma isku raacsanahay ma isla qabnaa …..”’ayuu yiri mr Ijaara.
Dadka Qaxootiga ayaa dhankooda bannaanbax ka sameeyey xerada Qaxootida ee IFO iyagoona ka cabanaya qeyla dhaanta kasoo yeereysa qaar badan oo Siyaasiyiinta gobolkan u dhashay.
…….”’Waan ka mudaharaadeyna aniga meeshan 7-carruur ah ayaa igu dhalatay gabadheyda igu weyna ,waxaa la yiraahda Xakiima ,wiilkii kale hadduu Secondry ku jiraa haddii maalintan soo bacakacay xuduuda la igu reebi lahaa waxba ima ahaaten….”’ayuu yiri odeygaas.
Xildhibaanka laga soo doorto magaaladda Gaarisa Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in la joogo wakhtigii Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ku dhawaaqi lahaa dib in loogu celiyo dalkooda Soomaalida ku jirta Xeryaha dalkaas.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin uuna beeninayo hadalada kasoo yeeray hoggaamiyaasha bulshada waqooyi bari Kenya in dhibaatada laga soo maleego xeryaha.